2012-09-02 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Computer နှင့် Mobile သင်တန်း
သင့်အနာဂတ်ဘ၀ကို ကွန်ပျူတာပညာရပ်ဖြင့် အသက်မွေးနိုင်ဖို့အထိ တာဝန်ယူသင်ကြားပေးနေပါပြီ။
1. Adobe Indesign ၊ 2. Adobe Premiere ၊ 3. Adobe Pagemaker	၊ 4. Essential software Guide ၊ 5. Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint)၊ 6. Beginner web Design ၊ 7. Hardware ၊ 8. Adobe Illustrator
အားလုံးပဲ နားလည်ပေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Talking Tom 2.1.3
​ဒီ android application ​လေး​က​တော့ ​က​လေး​လည်း​ကြိုက် ​လူ​ကြီး​လည်း​ကြိုက်​ပါ။ ​စိတ်​ရှုပ်​လာ​လို့ ​ရီ​ချင်​ရင် ​ဒီ application ​ကို ​သုံး​ကြည့်​လိုက်​ပါ။ ​ကို​ပြော​သ​မျှ​ကို ​သူ​လိုက်​ပြော​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​ဘယ်​လို​အ​သံ​ထွက်​လဲ ​ဘယ်​လို​ပြန်​ပြော​သ​လဲ ​စမ်း​ကြည့် ​လိုက်​ပါ။ ​ကျွန်​တော် ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကြည့်​လို့ ​နည်း​နည်း​ခေါင်း ​မူး​နောက်​နောက် ​ဖြစ်​လာ​ရင် ​ဒီ​ကောင်​လေး​နဲ့ ​စ​ကား​ပြော​ကြည့်​ပြီး ​နည်း​နည်း ​ရီ​လိုက်​ရင် ​ခေါင်း​ပေါ့​သွား​တာ​ပါ​ပဲ။
Minus | Mediafire | Filecloud
​ကဲ ​လို​ချင်​တဲ့​သူ​များ ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ယူ​နိုင်​ပါ​တယ်။ ​ဖုန်း​ထဲ​က​နေ ​ချက်​တင်​ချက်​လို့​ရ​သ​လို၊ ​ဖုန်း​ထဲ​က​နေ ​ဘယ်​ဝဘ်​ဆိုက်​ကို​မ​ဆို ​မြန်​မာ​လို​ရေး​ထား​တဲ့ ​ဆိုက်​ကို ​ကြည့်​ရှူ့​နိုင်​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​အ​ထဲ​မှာ keyboard ​နှစ်​မျိုး​ထည့်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်။
FrozenKeyboard_1.1.3.apk (​မြန်​မာ​စာ zawgyi keyboard) ​ယ​ခု​ကျွန်​တော်​တို့​သုံး​နေ​သည့် keyboard ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
Zawgyi_One.apk (zawgyi-one font ​ကို ​ဖုန်း​ထဲ​ကို ​ထည့်​သွင်း​ဖို့​လို​အပ်​ပါ​တယ်)
iTextmm2.apk (zawgyi keyboard ​တစ်​မျိုး​ပါ​ပဲ။ ​သူ​လည်း​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ်)
​အ​ပေါ်​က ​သုံး​မျိုး​ထဲ​မှာ Zawgyi_One.apk ​ကို ​မ​ဖြစ်​မ​နေ install ​လုပ်​ရ​ပါ​မယ်။ ​ပြီး​တာ​နဲ့ FrozenKeyboard_1.1.3.apk ​ကို install ​လုပ်​လိုက်​ပါ။ ​ဒါ​ဆို​ရင် ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​ပြီ။ install ​လုပ်​တာ​က ​လွယ်​ပါ​တယ်။ memory card ​ထဲ​ကို ​ထည့်​ပြီး ​ဖုန်း​ထဲ​မှာ install ​လုပ်​လိုက်​ရုံ​ပါ​ပဲ။ ​ပြီး​တာ​နဲ့ Frozen keyboard ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​သူ့​ကို ​အ​မှန်​ခြစ်​ပေး​ပေး​ပါ။ ​ပြီး​တာ​နဲ့ font ​မှာ zawgyi_one ​ကို ​ရွေး​ပေး​လိုက်​ပါ။ ​ဒါ​ဆို​ရင် ​ဖုန်း restart ​ကျ​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​ပြန်​တက်​လာ​ရင် ​အား​လုံး ​ရိုက်​လို့​ရ​ပါ​ပြီ။ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​သူ​များ ​ကျွန်​တော့်​ကို ​ကွန်​မန့်​ပေး​ခဲ့​လိုက်​ပါ​တယ်။ ​တစ်​ဆင့်​ချင်း​ဆီ ​ထပ်​ရှင်း​ပြ​ပါ့​မယ်။ ​အ​ခု​တော့ ​အ​လုပ်​များ​နေ​လို့ ​မ​ရှင်း​ပြ​နိုင်​တာ ​တောင်း​ပန်​ပါ​ရ​စေ။ ​ပြီး​ရင် ​ဖုန်း​ကို restart ​ဘယ်​လို​ချ​လဲ​ကို​ပါ ​ကျွန်​တော် ​ရှင်း​ပြ​ပေး​ပါ့​မယ်။ ​ခု​နောက်​ပိုင်း ​ဖုန်း​အ​တွက်​ကို​လည်း ​ထည့်​ရေး​ပေး​လာ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
Name : Frozen Myanmar Keyboard
Size : 276 kb
O/S : Android
Android Phone ​တွေ​အ​တွက် Myanmar Keyboard ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. android phone ​အား​လုံး​နီး​ပါး ​အ​ဆင်​ပြေ​ပြေ​နဲ့ ​သုံး​နိုင်​ပါ​တယ်။ version ​အ​မြင့်​ရှိ​ပါ​သေး​တယ်။ ​ထပ်​တင်​ပေး​ပါ့​မယ်။ version ​အ​မြင့်​ထက် ​အ​နိမ့်​က ​ပို​ပြီး​တော့ ​သုံး​လို့ ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ်။
Dropbox | MMZ | Mediafire | Zippyshare | Solid | Ziddu | Sharebeast | Filecloud | Tusfile
Name : Frozen Keyboard
Version : 0.6.0
Size : 897 KB
Frozen keyboard Pro ​နောက်​ဆုံး​ထွက် version ​လေး​ပါ။ Forzen keyboard pro ​အ​သုံး​ဖို့​အ​တွက် ​မိ​မိ​ရဲ့ device ​မှာ​ဇော်​ဂျီ​ဖောင့်​ထည့်
​သွင်း​ထား​ဖို့​လို့​ပါ​တယ်။Frozen keyboard ​ကို​ရေး​သား​သူ​က​တော့ Android developer ​ကို​သီ​ဟ​အေး​ကျော် ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။​သုံး​လို့​ကောင်း​တဲ့ ​မြန်​မာ​ကီး​ဘုတ်​လေး​ပါ ​ခုversion ​မှာ keyboard theme ​နှစ်​မျိုး​ပြောင်း​လဲ​အ​သုံး​ပြု​နိုင် ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
Dropbox | MMZ | Zippyshare | Solidfiles | Sharebeast | Ziddu | Tusfiles
USB Disk Security 6.2 (​တင်​ပေး​မည့် ​ပုံ​စံ​ပါ​သ​ဖြင့် ​မ​ဖြစ်​မ​နေ​ဖတ်​ပေး​ပါ)
autorun ​နှင့် ​အ​ခြား​သော autorun virus ​များ​ကို ​သတ်​ပေး​တဲ့ usb disk security latest version 6.2 ​ပါ. virus ​တော်​တော်​များ​များ​ကို auto run ​နှင့်​ရေး​ကြ​တာ​များ​ပါ​တယ်. ​ရေး​နည်း​က​လည်း ​လွယ်​တော့ auto run ​နဲ့​ပဲ ​ရေး​ကြ​တဲ့​အ​တွက် ​အ​ခု ​ဒီ antivirus tool ​ကို ​သုံး​ပြီး ​ထည့်​ထား​ပါ. ​အ​ရေး​ကြီး​ပါ​တယ်. ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။ ​အ​ရင်​တုန်း​က​တော့ ​တင်​ပေး​ထား​တာ 6.1 ​ရှိ​မယ်​ထင်​တယ်။ ​သုံး​နည်း​က​တော့ ​အ​ထူး​ပြော​စ​ရာ​လို​မယ်​မ​ထင်​ပါ​ဘူး. ​အ​ထဲ​မှာ keygen ​ကို​ပါ ​ထည့်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်.
​ဥ​ပ​မာ- 20034 ​ဆို​ပြီး ​တစ်​ဖိုင် 20034-k (or) 20034-s (or) 20034-c (or) 20034-p ​အဲ့​လို​မျိုး ​ပါ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​အဲ့​လို​မျိုး ​တစ်​ခု​မ​ဟုတ် ​တစ်​ခု​ပါ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​အဲ့​တော့ Download ​မ​လုပ်​ခင် ​သိ​ထား​ရ​မှာ​က
20034 ​ဆို​ပြီး ​နောက်​က ​ဘာ​မှ ​မ​ပါ​လာ​ရင် software ​ပါ
20034-k ​ဆို​တာ k = keygen
20034-s ​ဆို​တာ s = Serial Number
20034-c ​ဆို​တာ c = crack
20034-p ​ဆို​တာ p = Patch ​ဆို​တာ​ကို ​သိ​ထား​ပေး​ပါ.
license version (or) Full version ​ဖြစ်​ဖို့ ​အဲ့ (4)​နည်း​ပဲ ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​ဒီ့​အ​တွက်​ကြောင့် ​နောက် ​တင်​သည့် ​ပို့စ်​တွေ​မှာ​တော့ ​ဘာ​နဲ့ license version ​လုပ်​မယ်​ဆို​တာ​ကို ​ရေး​ပေး​မှာ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး။ Download ​လုပ်​တဲ့​ဖိုင်​မှာ​ပဲ ​ကြည့်​ပါ။ ​ခေါင်း​စဉ်​မှာ ​တတ်​နိုင်​ရင် ​မြန်​မာ​လို​ပါ ​ရော​ရော​ပြီး ​ထည့်​ပေး​ပါ့​မယ်။ ​ကဲ​အ​ဆင်​ပြေ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။
Filecloud | Minus | Mediafire
ကျွန်တော်လည်း စာစီစာရိုက် Group က ရတာလေကို မကြည်လို့ နည်းနည်းပါးပါးပြန်ပြင်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ .. လိုချင်တဲ့သူရှိရင်တော့ အောက်မှာ Downlo...
Smadav အကြောင်းကို စပြီးတင်ပေးခဲ့စဉ်တုန်းက ရေးပေးခဲ့ဖူးပြီးပါပြီ .. ကျွန်တော့် Blog ကို ဖတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ သိပါလိမ့်မယ် ... kasper, No...
Android phone ​များ​အ​တွက် Zawgyi Keyboard and Fon...
USB Disk Security 6.2 (​တင်​ပေး​မည့် ​ပုံ​စံ​ပါ​သ​...